‘भारतसँग टक्कर गरेर काठमाण्डु आगोसँग खेल्दैछ’ : भारतीय मिडिया | Canadian Reporters
‘भारतसँग टक्कर गरेर काठमाण्डु आगोसँग खेल्दैछ’ : भारतीय मिडिया
Posted on November 5, 2015 by क्यानेडियन रिपोटर्स
भारतले बाँकी नेपालको टाउकोमा बन्दुक तेस्र्याएर मधेसको वकालत ग¥यो ः इन्डियन एक्सप्रेस
नेपालले भनेअनुसार भारतीय नाकाबन्दीका कारण भएको इन्धन संकट र मूल्यवृद्धिले भारतविरुद्ध काठमाण्डु उपत्यकाभित्र आवेश उत्पन्न गरिएको छ । नेपाललका उपप्रधानमन्त्रीले सोमबार नाकाबन्दीको विरोध गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनसँग कुराकानी गरे । प्रधानमन्त्री मोदीले सीमापारबाट गएका भारतीय नागरिको मृत्युको विरोध गरेका छन् ।
नयाँदिल्लीको यो दाबी सत्य हुनसक्छ कि ट्रक व्यवसायीहरू समस्याग्रस्त तराईबाट सामान ढुवानी गर्न अनिच्छुक छन् । तर, काठमाण्डुसँगै सहकार्य गर्नुपर्छ सेफ ट्रान्जिटका लागि, साइडलाइन्समा उभिएर होइन । सारमा भारतले बाँकी नेपालको टाउकोमा बन्दुक तेस्र्याएर मधेसको पक्षबाट वकालत गरिरहेको छ । यसबाट संकट समाधान भएपछि पनि आक्रोश बढ्ने निश्चित छ ।
नेपालमा भारतीय युवाको मृत्यु ः दुवै देशका लागि वेकअप कल हो ः द हिन्दू
नेपाल र भारतबीच आँकलनको खतरनाक खेल खेलिदैँ छ र नेपाली प्रहरीको गोली प्रहारबाट भारतीय युवाको मृत्युलाई दुवै देशले वेकअप कलका रूपमा लिनुपर्छ र यो असन्तुष्टिको तत्काल अन्त्य गरिनु आवश्यक छ ।
आफ्नो तर्फबाट नयाँदिल्लीले के महसुुस गर्नुपर्छ भन्ने शब्द र कर्ममा मात्रै होइन, नेपाललाई साघुँरो पार्दै छ भन्ने दृष्टिकोणमा समेत पूर्ण परिवर्तन गराउनु आवश्यक छ । सरकारले अस्वीकार गरे पनि केहीले विश्वास गरिरहेका छन् कि सरकार काठमाण्डुमा सहज आपूर्ति गराउन सहयोगहीन अवस्थामा छ । यसलाई परिवर्तन गराउन आवश्यक छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतलाई चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? ः नवभारत टाइम्स
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतलाई चेतावनी दिए कि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरोस् । भारतले तराई क्षेत्रमा हिंसा भड्काउने आरोप लगाउनसम्मको यस्तो भाषाको प्रयोग कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीले गरेका थिएनन् । यसबाहेक नेपालले चीनबाट तेल ल्याउन पहिलोपटक प्रयास ग¥यो यसअघि भारतबाट मात्रै नेपालमा तेल आपूर्ति भइरहेको थियो । यो किन भयो भन्ने कुरा हाम्रो विदेश नीतिको अहं प्रश्न हुनुपर्छ । कहीँकतै हाम्रो नेपालबारे अतिरञ्जनापूर्ण सिकार भइरहेका छौँ कि भन्ने प्रश्न पनि छ ।
जब संविधान आयो, मधेसीहरूको विषयमा भारतले अडान राख्यो । जसको आशय नजिकको मित्र र छिमेकीलाई सुझाव थियो, तर नेपालले यसलाई आन्तरिक मामिलाको हस्तक्षेप ठान्यो । अहिले नेपालमा धारणा छ कि भारत सरकार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति रोकेर नेपाललाई घुडाँ टेकाउन चाहन्छ ।
काठमाण्डु आगोसँग खेल्दै छ ः हिन्दुस्तान टाइम्स
नयाँ दिल्लीले टाढै बसेर काठमाण्डुलाई भन्नैपर्छ कि जाग र घर थन्कोमा राख । मुद्दाहरू सहज रूपमा गरिरहेका छैनन् । मधेसीहरू जनसंख्याका आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मागिरहेका छन् । राज्य संरचनारूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हिसाबले सकारात्मक विभेदको अवस्था र सीमांकनमा पुनरावलोकनको माग गरिरहेका छन् ताकि उनीहरू वञ्चित भएको राजनीतिक शक्ति प्राप्त गरुन् । तर, काठमाण्डु आगोसँग खेलिरहेको छ र अरूलाई होइन आफैँलाई आरोप लगाइरहेको छ ।
सिटौला किन टाढिए कोइरालाबाट ?
NASA-commissioned 3D food printer makes on-demand pizza
मोदीको बिहारका संदेश, नफरत न फैलाएं: न्यूयॉर्क टाइम्स
नरेन्द्र मोदीको बिरुद्द बेलायतबासि नेपाली सडकमा उत्रिए :: भिडियो हेर्नुहोस
ललितपुरमा घुस खादा खादै समातिए प्रहरी
क्यानाडामा पनि प्रदर्शन : The Concern-Nepal, Canada Spoke Against Indian blockade
नबिन पौडेलको स्वोरमा शिब हरि पौडेल – वर्षकै सर्बाधिक हिट कमेडी गित